Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : avonavompitia
Entry avonavom-pitia (avonavona, tia)
Examples L'après-midi, ce sera une autre tournée de démonstration. Avec des genres comme le Tafam-pitia na Avonavom-pitia, qui se jouera entre un homme et une femme, ou encore le Dontany sy kapotandroka, un trio de virulence verbale en perspective [Express de Madagascar ]
Entry Avonavom-pitia (avona, tia)
Author Zanell J.
Text Hono, ry tsikirity amoron-dalana; ry vero aman'ampanga an-tsisim-boly: Nandalo teto ve Andriantsoa mora tia, mora tofoka? Ka inona no dinika nolazainy, inona no hafatra napetrany? Mbola tia, mbola manina ve, hono, izy, no migogogogo toa zazakely, ary s midradradradra tsy mahalala menatra? Nahoana no omaly mampitamby sy mampifilafila, ka anio ihany dia mifona sy milela-paladia? Tsy mbola nilaozako tandavan-taona ka mimenomenona sahady hamerina. Lazao azy, ry vonin'avoko an-tampon-tanety; ambarao azy, ry ahitsorohitra an-kalamanjana, raha mbola misy fitia tsy levona'o hoe any, saingy sendaotra tamim-pahatezerana, dia tsy omeko tsiny, tsy omeko fondro, fa rehefa mivalo sy migirasy tamin'ny fahadisoana dia avelako. Kibo tsy sosotra aman-kavana no aty, ary fo tsy mitahiry lolom-po, ka rehefa niady maraina dia tsy menatra hangata-pihavanana hariva. Izany, hono, no fahendrena, izany no fananan-tsaina.